/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/ကာယဗလ, သောက်သုံးသောနှင့်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Proviron (Mesterolone)
အပေါ် Posted 01 / 25 / 2019 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
ဘာ Is ကိုကုန်ကြမ်း Proviron (Mesterolone)?
ကုန်ကြမ်း mesterolone အဝါရောင်မှအဖြူတစ်ပုံဆောင်ခဲအမှုန့်နှင့်အရေအတွက်ပျော်မထားဘူး။ ဒါဟာလေ့က၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်, Proviron သဘောကိုသိရ၏။ တစ်ခုချင်းစီကို Proviron တက်ဘလက် / ဆေးလုံး 25mg န်းကျင်ဆံ့ ကုန်ကြမ်း mesterolone အမှုန့်မတူသည်မှာအခြားအ steroids, ကုန်ကြမ်း Mesterolone သုညပင်အလွန်အားနည်းသို့မဟုတ်ဟိုလှုပ်ရှားမှုပါရှိပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်သည်တစ်ဦးကိုရည်ညွှန်းသည်မဟုတ် ဟို steroid တစ်မျိုး။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမ mesterolone ဆေးထိုးနှုတ်အရှင်အုပ်ချုပ်သည်။
Schering 1934 အတွက် Mesterolone တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအသီးသီး 1935 နှင့် 1937 အတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ဆေးဝါးအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ထားတဲ့ Methyltestosterone နှင့် testosterone Propionate အတူအသုံးပြုသောအသက်အကြီးဆုံး steroids ကြားတွင် rated ဖြစ်ပါတယ်။ testosterone propionate နှင့် Methyltestosterone ကြောင့်သူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဟိုလှုပ်ရှားမှုပိုမိုလူသိများခဲ့ကြသည်။ Proviron က၎င်း၏လူကြိုက်များအခြားနှစ်ဦးကိုစတီရွိုက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပွားဘူး, အရှင်တစ်ဦးအားနည်း Steroid တစ်မျိုးထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
Mesterolone (Proviron) သလောက်ရှေးဟောင်းမူးယစ်ဆေးစဉ်းစားသည်၎င်း၏အပြုသဘော features တွေပါသေးရက်စွဲအထိထွက်ရပ်တယ်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကြားသည်းခံစိတ်နှင့် ပတ်သက်. အလွန်ထိရောက်သောဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပညာလယ်ပြင်တွင်, Mesterolone (1424-00-6) lido ကမောက်ကမဖြစ်မှု, မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းနှင့်အနိမ့်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ကိုခံရသောသူအိုမင်းအမျိုးသားများတွင်သုခချမ်းသာလျှော့ချကုသရန်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးပါးစပ်ဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆေးပညာ, mesterolone (Proviron) အဓိကအားဖြင့်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းပြင်ပေးဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အခြားအအန်ဒရိုဂျင်သို့မဟုတ်ဟို steroids ယာယီမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေ endogenous gonadotropin ဖိနှိပ်နေချိန်မှာစံဆေးညွှန်းမှာအသုံးပြုတဲ့အခါ, Proviron, ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ LH ၏အဆင့်ဆင့်ထိခိုက်စေပါဘူး။ သို့သော်အချို့လူတွေယုံကြည်ဖို့လေ့တူသော Proviron LH အဆင့်ဆင့်မြှင့်တော်မမူကြောင်းမကောင်းလှ၏။ သုတေသနအရ, Mesterolone ဤလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်လိုအပ်သည့်အန်ဒရိုဂျင်ဆိုးကျိုးများပေးခွငျးအားဖွငျ့ဝှေးစေ့များတွင် spermatogenesis မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။
Proviron Steroid တစ်မျိုးက၎င်း၏လမ်းအတွက်ထူးခြားတဲ့ပေမယ် Winstrol, Masteron နှင့် Anavar နှင့်အတူအချို့သောစရိုက်များဝေမျှပေးသည်။ performance ပညာရှိ Mesterolone ကြွက်သားထုထည်၏ buildup မြှင့်တင်ရန်ရန်အသုံးပြုသည်မဟုတ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သံသရာ bulking စဉ်အတွင်းတစ်ခုမရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ယင်း၏ function ကိုဒီအဆင့်မှာလည်းထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏အသုံးပြုမှု, သံသရာဖြတ်တောက်ပိုမိုသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။
Schering လက်ရှိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသည်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အောက်တွင် Proviron Mesterolone ထုတ်လုပ်တယ်။ ဒါဟာဥပမာ, ဂျာမနီအတွက် Asche နှင့် Jenepharm အသီးသီး Pluriviron နှင့် Vistimon အောက်မှာရောင်းချ, ကွဲပြားခြားနားသောအမည်များကို အသုံးပြု. ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ အိန္ဒိယတွင်ဘရောင်းနှင့် Burke က Restore နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အောက်မှာရောင်း။ ဝမ်းနည်းစရာ Proviron အမေရိကန်အတွက်ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးအဖြစ်အတည်ပြုဖူး
ကုန်ကြမ်း Proviron (Mesterolone) ဓာတုလက်ခဏာ
Mesterolone ယင်း၏ 1 ပေါ် 1-methyl-dihydrotestosterone တစ် methyl အုပ်စုတစ်စု၏ပါဝင်မှုမှတဆင့်ပြောင်းလဲတဲ့ Dihydrotestosterone ဆင်းသက်လာဖြစ်ပါသည်st ကာဗွန်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ဒီမူးယစ်ဆေး Hepatic ပျက်ပြားအရှင်နှုတ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်ခံယူမထားဘူး။ အဆိုပါခံတွင်းဟို steroids များထဲတွင် Proviron alkylated C17-alpha-မရှိဘဲအနည်းငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦး methyl အုပ်စုတစ်စုသယ်ဆောင်။ ပါးစပ်နှင့်ဆိုင်သော Primobolan အဆိုပါမီသိုင်းအုပ်စုတစ်စုကိုရည်မှတ် Proviron ကဲ့သို့တူညီသောအမျိုးအစားအောက်တွင်ကျရောက်ပါတယ်။ C17-aa ပါးစပ် steroids Proviron ထက်ပိုမိုမြင့်မား bioavailability ပါရှိပါတယ်။ ဒါဟာအဆိုးကာယဗလတိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အကြား Proviron ရဲ့ကျော်ကြားမှုထိခိုက်ခဲ့သည်။
testosterone ဟော်မုန်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်, Mesterolone အသီးသီး 100-150 နှင့် 30-40 တစ်ခုဟိုနှင့်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သယ်ဆောင်။ အသီးအသီးအမျိုးအစားထဲမှာ 100 မှာ testosterone နှုန်းထားများ။ ပင်မြင့်မားသောဟိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူ, Mesterolone testosterone ဟော်မုန်းထက်အနည်းငယ်မျှသာဟိုလှုပ်ရှားမှုများဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူအမှုမြင့်မားဟို rating ပေမယ့်အနိမ့်ဟိုလှုပ်ရှားမှုအတွက်လူသိများကြောင်း Halotestin တတ်၏။ Proviron ရဲ့အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဟာအန်ဒရိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်ကိုလျှော့ချအချိန်များတွင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမူးယစ်ဆေး display တွေအရေးဟို features တွေ, အထက်ပါဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, အရှင်လေ့တစ်ခုအန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်ရည်ညွှန်း။ ကြွက်သားတစ်ရှူးကစုပ်ယူလျှင်မြန်စွာချက်ချင်းရုံ DHT ၎င်း၏မိဘဒြပ်ပေါင်းများကဲ့သို့ Proviron ချကျိုးသည်နှင့်မလှုပ်မရှား metabolites သို့ metabolised ။ ဒါဟာအားနည်းဟိုလှုပ်ရှားမှုများရှိပါတယ်ဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
, dihydrotestosterone မှချည်နှောင်ကြွက်သားတစ်ရှူးအတွက်အလွန်အမင်းစုစည်းဖြစ်ပြီးသုညဟိုသက်ရောက်မှုနှင့်အတူရောစပ်သို့ပြောင်းပေးသည့်အင်ဇိုင်း 3-hydroxysteroid dehydrogenase ။ Proviron ထို့ကြောင့်အလွန်အားနည်းဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်လာသည်။ ကာယဗလအကြားကောလာဟလ Proviron အရှင်က၎င်း၏ဟိုလှုပ်ရှားမှုများအားနည်းအောင်ကြွက်သားတစ်သျှူးမှာတွေ့ရှိအန်ဒရိုဂျင် receptors တားမြစ်ကရှိသည်။ သိပ္ပံနည်းကျ, ဤကိစ္စတွင်မဟုတ်ပါဘူး။
Mesterolone Globulin (SHBG), သူတို့ကိုမလှုပ်မရှားအောင်, ထိုကဲ့သို့သော testosterone ဟော်မုန်းအဖြစ်ဟို steroids မှသူ့ဟာသူအလေးထားတဲ့ပရိုတိန်း binding လိင်ဟော်မုန်းတစ်ခုထိပ်တန်းဆှဖှေဲ့ပါရှိပါတယ်။ Proviron သည်အခြားဟိုစတီရွိုက်နှင့်အတူအသုံးပြုသည်သောအခါ, ဤလုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့်ဟိုစတီရွိုက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ အဆုံး၌, ပိုမို testosterone ဟော်မုန်းကိုခန္ဓာကိုယ်အတွက်၎င်း၏ function ကိုဖျော်ဖြေဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
Proviron လည်း aromatase အင်ဇိုင်းအဖြစ်လူသိများ, အီစထိုဂျင်မှ testosterone ဟော်မုန်းပြောင်းလဲသောအင်ဇိုင်းနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည် Steroid တစ်မျိုးကတော့ aromatase အင်ဇိုင်းဖို့သူ့ဟာသူ binding ထို့ကြောင့်အီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် aromatase လှုပ်ရှားမှုတားဆီး။ ၎င်း၏ဆန့်ကျင်အီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှုတစ်ခု Aromatase တားမြားကဲ့သို့အစွမ်းထက်မကျမည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသိသာသည်။ အဆိုပါအဆင့်ဆင့်တစ်ဦးကာယဗလမယ်မှုများလုပ်ဆောင်သံသရာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ဖြစ်ကြသည်။
ကုန်ကြမ်း Proviron (Mesterolone) ကာယဗလအတွက်အကျိုးခံစားခွင့် (Proviron အဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း?)
Proviron စဉ်အတွင်းကာယဗလအသုံးပြုတဲ့အဓိက Steroid တစ်မျိုးမဟုတ်ပါ bulking သံသရာ။ အခါသံသရာချွတ်တချို့ကတောင်မှမသုံးပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်တစ်ဦး stack ထဲမှာ Proviron အပါအဝင်တစ်ကာယဗလမယ်အောင်မြင်မှုများအတွက် bulk အဆင့်တစ်လျှောက်ဝင်ပြီးအမှတ်ကူညီပေးသည်။ တိုးတက်မှုကိုမဆုတ်ရန်စတင်နှင့်အချိန်များတွင်အရှိဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းများအတွက်သံသရာစဉ်အတွင်းတစ်ချိန်ချိန်ရပ်တန့်စေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အရှင်လှုပ်ရှားမှုဟာသူတို့ရဲ့အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်သည့် stack ထဲမှာပါဝင်သောအခြား steroids ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ်ကတည်းက Proviron ဤအချက်မှာအများကြီးအကျိုးရှိလိမ့်မည်။
ယှဉ်ပြိုင်မှုကာယဗလတစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာစဉ်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်း၏ကြီးမားသောဆေးညွှန်းကိုသုံးပါ, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်, အသောက်သုံးသော Off-ရာသီစက်ဝန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤအဆင့်တွင်ကာလအတွင်းအနိမ့်သည်။ သို့သော်အချို့အသုံးပြုသူများသည်လာသောအခါအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်သံသရာရာသီ testosterone ဟော်မုန်း၏ကန့်သတ်ပမာဏယူရွေးချယ်။ ဒါကြောင့်လိုအပ်သောအန်ဒရိုဂျင်ထပ်တိုးပေးသည်ကတည်းက Mesterolone ထိုကဲ့သို့သောအမှု၌နေရာလေးကိုအတွက်လာပါတယ်။ ဒါဟာမလိုအပ်တဲ့အဖြစ်ယူဆစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အလွန်အကျိုးရှိပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Mesterolone ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာစဉ်အတွင်း, ကာယဗလအသုံးပြုပုံအကောင်းဆုံးအသုံးပြုသည်။ ဤအဆင့်စဉ်အတွင်းက Masteron ၏သူတို့အားအလားတူ features တွေ hardening ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏အထင်ရှားဆုံးအကျိုးကျေးဇူးအခြား steroids ၏ hardening စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည် stack ထဲမှာပါဝင်သည်။ Proviron ပိုမြန်ပြီးပိုထိထိရောက်ရောက်ခန္ဓာကိုယ်အဆီကိုမီးမရှို့ရန်အသုံးပြုသူအားဖွင့်ဟာအန်ဒရိုဂျင် receptor မှပြင်းပြင်းထန်ထန်ချည်နှောင်။ Proviron ရဲ့ Anti-အီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှုစဉ်းစားအသုံးပြုသူများအနည်းဆုံးရေ retention ကိုခံရကြလိမ့်မည်, နှင့်ဖြစ်ကောင်း, အ stack ထဲမှာရိုးရာ Anti-အီစထိုဂျင်အပါအဝင်၏မလိုပါဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင် Proviron အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်း၏နံပါတ်တိုးပွားစေပါသည်။ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ဟို Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုမှု၏ဤကာလအတွင်းယေဘုယျအားဖြင့်အနိမ့်များမှာကတည်းကဒါဟာအများကြီးကူညီနိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်များအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းဆေးများအပေါ်ကိုမကျင့်သောသူအအသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ Proviron ပါဝင်သည်သူကိုတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အမြင့်မားဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာစဉ်အတွင်း mesterolone ၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးကျေးဇူးသည်အခြား steroids ၏အန်ဒရိုဂျင်တိုးတက်လာဖို့က၎င်း၏စွမ်းရည်ကောင် hardening ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအတူ stack ထဲမှာပါဝင်သည်။ effects များ Proviron သောက်သုံးသော အသုံးပြုသူပိန်ကြုံလျှင်သာမှတ်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
အစောပိုင်းကဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, Mesterolone (Proviron) DHT တစ်ဆင်းသက်လာသည်။ ဤသည်က၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုမဆိုအီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ပတ်သက်. မဆောင်ခဲ့ပါဘူးဆိုလိုသည်။ သည်အခြား Anti-အီစရိုဂျင်ဆေးပြားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဥပမာ, Nolvadex, Proviron အလွန်အားကောင်းတဲ့မဟုတ်သော်လည်း, တစ်ဦးထက်ပိုသောထိရောက်သောအီစထိုဂျင် inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဆေးပြားခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပြီးသားထုတ်လုပ်အီစထိုဂျင်ဖိနှိပ်စဉ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, Proviron အီစရိုဂျင်၏ထုတ်လုပ်မှုတားဆီး။ အထိခိုက်မခံအီစထိုဂျင်နေသောကာယဗလသည်အခြား steroids အတူ Proviron အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ stack ထဲမှာထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာအခြားအစတီရွိုက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး Proviron အားဖြင့်လျော့ပါးနေကြသည်။ ၎င်း၏ဆန့်ကျင်အီစထိုဂျင်အင်္ဂါရပ်မှ, Proviron ယခုရင်သားကင်ဆာနှင့် gynecomastia ကုသရန်ဆေးလယ်ပြင်၌အသုံးပြုပါသည်။
Proviron steroid တစ်မျိုး, ကိုယ့်ကတခြားနဲ့တူ DHT ဆင်းသက်လာ, ခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဒါဟာတစ်နေ့တာလှုပ်ရှားမှုများဖို့တစ်ရက်တွင်အသုံးပြုစွမ်းအင်သို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်သိုလှောင်ထားသောအဆီသိုက်၏ပျက်ပြားအားပေးအားမြှောက်။ ပြန်လာများတွင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် lipid အဆင့်ကိုလျှော့ချထားသည်။ lipid အဆင့်ဆင့်အတွက်လျော့ချရေး Proviron အသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တိုးမြှင့်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်တို့ကဆောင်သည်။ Mesterolone သံသရာဖြတ်တောက်ကာလအတွင်းအလွန်ထိရောက်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။
Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုသူများသည် aromatisation နှင့်ကိုလိုကျနာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်, အထူးသဖြင့်လာသောအခါအလွန်စိတ်ညစ်စရာရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ testosterone ဟော်မုန်းဒါမှမဟုတ် steroids မှတဆင့်အုပ်ချုပ်သောကြောင့်အီစထိုဂျင်သို့ကူးပြောင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေ retention ကို, ကိုယ်အလေးချိန်, gynecomastia, အခြားသူများအကြားဟော်မုန်းအတက်အကျများပါဝင်သည်ကိုလိုက်နာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အီစထိုဂျင်ကိုလည်း cortisol အဖြစ်လူသိများ anti-ဟိုစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆျော။
ကောင်းမွန်သောသတင်း Proviron aromatise ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒါဟာ aromatisation အားပေးအားမြှောက်သောအင်ဇိုင်းဖို့သူ့ဟာသူ binding ဖွငျ့ဤအန္တရာယ်များဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီး။ ထို့ကြောင့် Proviron အီစထိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုများကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ထိုလှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့်အကြောင်းကိုယူဆောင်ဘေးထွက်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးထားပါတယ်။
အများဆုံးရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်, ကာယဗလ Proviron Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူဟိုနှင့်အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်သီးနှံများကိုပုံ။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်ပထမဦးစွာပြုလုပ်အီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတားဆီး။ ဒုတိယအချက်မှာ Proviron သူတို့ကိုပိုပြီးထိရောက်အောင်သည်အခြား steroids များအတွက်ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ် system ထဲမှာအန်ဒရိုဂျင် receptors မှသူ့ဟာသူချည်နှောင်ကတည်းကဒါဟာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာလုံးကိုစတီရွိုက်ကိုပိုမိုတက်ကြွဖြစ်လာသည့် stack မှဆက်ပြောသည်။ ဥပမာနဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါမှာ Anavar သို့မဟုတ် Androlic Steroid တစ်မျိုး။
လိင်ဟော်မုန်းစည်းနှောင် globulin (SHBG) ကိုလျော့နည်းစေ
လိင်ဟော်မုန်းစည်းနှောင် globulin အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းများ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရရှိနိုင် testosterone ဟော်မုန်းချည်နှောင်။ Proviron အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုတိုးလာအရေအတွက်ရရှိလာတဲ့ထို့ကြောင့်ကလျှော့ချ, ဒီဟော်မုန်းတစ်ခုမြင့်မားတဲ့စည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းကြွက်သားသံသရာ bulking နှင့်ဖြတ်တောက်ကာလအတွင်းတည်ဆောက်အားပေးအားမြှောက်။ သူတို့ရဲ့သံသရာ stack ထဲမှာ Proviron ပါဝင်သည်သူကိုတစ်ဦးချင်းစီအများဆုံးကျိန်းသေပိုကောင်းရလဒ်တွေကိုခံစားပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်။
Mesterolone 1424-00-6 ကိစ္စအများစု condition.In အထီးခွဲမွေးဖွားသို့မဟုတ်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းများအတွက်သင့်လျော်သောဆေးဖြစ်ပါသည်, ဤပြဿနာကိုသုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှု၏လျော့ချအဆင့်ဆင့်တို့ကဆောင်သည်။ အထီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းနှင့်ကလေးမွေးဖွားနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအလွန်ရှင်းလင်းသောမဟုတ်ပေမယ့်, ကသုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုဥပမာ, testosterone ဟော်မုန်းအဘို့, gonadotrophins နှင့်အန်ဒရိုဂျင်အပေါ်မှီခိုကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ ဤရွေ့ကားဟော်မုန်းလိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကိုလှုံ့ဆော်ဖို့တာဝန်ရှိသည်။ Proviron, အခြားတစ်ဖက်တွင်, အန်ဒရိုဂျင်ကိုလှုံ့ဆျောပေမယ်က gonadotrophins မထိခိုက်ပါဘူး။ ဒါကကလေးမွေးဖွားတိုးမြှင် Proviron သုက်ပိုးအရေအတွက်ကျေနပ်မှဘာသာပြန်ပေးသည်။
တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ဘို့ရန်ပြင်ဆင်နေသည့်အခါ Proviron ပြီးပြည့်စုံအဖော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခွန်အားထိန်းသိမ်းခြင်းကြွက်သားမြင်သာတိုးတက်အောင်နှင့်ပြိုင်ပွဲပြင်ဆင်မှုကာလတစ်လျှောက်လုံးကြွက်သားထုထည်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အထောက်အကူ။ မရေမတွက်နိုင်သောကာယဗလအီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်လျှော့ချစဉ်ကအန်ဒရိုဂျင်၏အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးကတည်းကဖြတ်တောက်နှင့် bulking များအတွက် Proviron အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ရေ retention ကိုလျော့ချနေစဉ်ရေရှည်မှာအသုံးပြုသူများကဲ့သို့သောအများဆုံးပါဝါ output ကိုအဖြစ်အန်ဒရိုဂျင်အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့အဆီလည်းမီးလောင်ဆိုးကျိုးများခံစားပါ။
အစောပိုင်းကဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, Proviron testosterone ဟော်မုန်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ ပြန်လာများတွင် testosterone ဟော်မုန်းလည်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အဖြစ်လူသိများ, ခွန်အားမရှိခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာ။ ဒါဟာအစအံ့သြလောက်အောင်လိင်စိတ်ကထပ်ပြောသည်, ဒီဆိုလုံလောက်တဲ့အကြောင်းရင်း ကာယဗလမယ် တစ်ဦး stack ထဲမှာထည့်သွင်းရန်။
အဘယ်သူမျှမ mesterolone ဆေးထိုး
အရေပြားပေါ်မှာဆေးထိုးအပ်ကို အသုံးပြု. ၏အတွေးတစ် Steroid တစ်မျိုးကိုသုံးပြီးထံမှကာယဗလတားဖြစ်နိုင်တယ်။ ကံကောင်းတာက, Proviron, နှုတ်သင်တစ်ဦးနာကျင်မှုစိတ်သက်သာရာယူနိုင်မယ့်အတူတူလမ်းခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သငျသညျတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ကိုမုန်းသောအမျိုးအစားများမှာလျှင်, Proviron ကကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအခြားကာယဗလအကျိုးအတွက်မေ့လျော့မပေးသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်သင့်သည်။
ဆန့်ကျင် -depressive အကျိုးကျေးဇူး
mesterolone အပေါ်ပြုဆေးပညာဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာဒီ Steroid တစ်မျိုးစိတ်ကျရောဂါခံစားနေရအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်လေနိုင်ကြောင်းညွှန်ပြ။ ဒီအခွအေနေခံစားနေရပြီးတစ်ဦးချင်းစီအကြားအသုံးပြုမှုကိုဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ အလားတူလေ့လာရေးအဆိုပါရလဒ်များအရအိပ်ယာထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုခဲ့ကတည်းကသိပ္ပံနည်းကျ, စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကိုအပြီးသတ်သောကြဘူး။ Proviron မြင့်မားတဲ့အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုအရှင်ဟော်မုန်းမညီမမျှနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်ပါရှိပါတယ်။ အလှည့်၌, Proviron, သုခချမ်းသာတဲ့သဘောမျိုးတိုးတက်ကောင်းမွန်ယုံကြည်မှုနှင့်ကာယဗလမယ်တစ်ဦးအပြုသဘောနှင့်ကောင်းသောစိတ်ဓါတ်များမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Proviron (Mesterolone) သောက်သုံးသော
Mesterolone, အကောင်းဆုံးကိုပါးစပ်ဟို Steroid တစ်မျိုးနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေများတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိ၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များတချို့နာမကျန်းဆက်ဆံပါနှင့်ကာယဗလဘို့ရန်အဘို့အ။ Proviron အကျိုးကျေးဇူးများကိုအများဖြစ်ကြ၏ပေမယ့်ညာဘက်ဆေးညွှန်းအုပ်ချုပ်ခွင့်အခါသာခံစားနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရည်ရွယ်ချက်အဘို့အကြံပြုအဆိုပါဆေးများကိုအောက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးက 25mg တက်ဘလက်အာနိသင်ဆက်ဆံဖို့တစ်ရက်သုံးကြိမ် ယူ. သားယောက်ျားကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ features တွေလျှော့ချသင့်ပါတယ်။ စုစုပေါင်းသောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင် 75mg ရပါမည်။ ဤသည်သောက်သုံးသောကုသမှု၏ကနဦးအဆင့်မှာအုပ်ချုပ်သည်။ အဆိုပါသောက်သုံးသောအချိန်နှင့်အတူတစ်ချိန်ကတစ်နေ့လျှင်မီလီဂရမ်တက်ဘလက် 25 မှလျော့နည်းစေသည်။ အလားတူ Proviron သောက်သုံးသောအထီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကုသရန်အသုံးပြုသည်။ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန် Proviron တလျှောက်တွင်အသုံးပြုကြသည်။
ကာယဗလတိုးမြှင့် performance နေ့စဉ် 50mg မှ 150mg တစ်ထိုးကိုအသုံးပြုပါ။ သုတေသနအရ, Proviron ဝက်ဘဝကိုနာရီ 12 မှ 13 အကြားနေကြပါတယ်။ ဒီသောက်သုံးသော၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည်အဓိကအားဖြင့်အီစရိုဂျင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရေ retention ကို၏အဆင့်ဆင့်ကိုလျှော့ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီသောက်သုံးသောခန္ဓာကိုယ်စနစ် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်သံသရာပြီးနောက်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းမဆိုအခွင့်အလမ်းတွေကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုအပ်ကြောင်းသေချာ။ အများဆုံးဖြစ်ရပ်အတွက်, ယောက်ျားနိမ့်ဆုံးသောက်သုံးသောအဖြစ်တစ်နေ့လျှင် 100mg ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် 150mg နှင့် 100mg နေ့စဉ်ဆေးများနှစ်ဦးစလုံးတန်းတူအသုံးအနှုန်းများအတွက်အလွန်အမင်းအကျိုးရှိသောဖြစ်လိမ့်မည်။ Proviron သောက်သုံးသောအုပ်ချုပ်ရေးရှစ်တကျိပ်နှစ်ပါးမှပတ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြာရှည်ခံသည်။ အများအားဖြင့်သံသရာ၏နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အဓိကအတားအဆီးကိုကျော်လွှားရန်, တစ်ဦးကိုခြောက်ပတ်ကြာ Proviron သင်တန်းပဉ္စလက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျန်းမာသန်စွမ်းအားကစားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အမျိုးသမီးအသုံးပြုသူများအ Proviron ကိုအသုံးပြုပါ။ သို့သျောလညျးအမြိုးသမီးမြား s မှယင်း၏အသုံးပြုမှုမြင့်မားစိတ်ပျက်အားလျော့။ အမျိုးသမီးကိုအသုံးပြုရန်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တစ်နေ့လျှင် 25mg တစ်သောက်သုံးသောကြွက်သားမြင်သာမြှင့်တင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါစားသုံးမှုမဟုတ်ရင်အသုံးပြုသူ virilization ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခံရပါလိမ့်မယ်လေးငါးပတ်ကထက်မပိုသင့်ပါတယ်။ Proviron နှင့်ကိုယ်ဝန်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့်သူနာပြုမိခင်များဒီမူးယစ်ဆေးကိုချွတ်စောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။
သငျသညျ Proviron သုံးပြီးအပေါ်အစီအစဉ်ရှိပါကအခြား steroids အတူက stacking ထိခိုက်မှုထက်သင်ပိုမိုကောင်းသောပြုလိမ့်မည်။ ကလူလည်း Winstrol, Androlic, Primobolan, Anavar နှင့် Masteron ရှာဖွေ Mesterolone, သံသရာဖြတ်တောက်စဉ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါ။ ဒါဟာတပ်မက်လိုချင်သောအခက်ခဲကောင်ပေးကြဖို့ stack ထဲမှာအသုံးပြုတဲ့စတီရွိုက်၏အန်ဒရိုဂျင်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအကျိုးရှိသောဖြစ်ထေူလျှင်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦး bulk သံသရာထဲမှာပါဝင်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ဝေးဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအပေါ်အဘယ်သူမျှမအစီရင်ခံစာများသံသရာစဉ်အတွင်း Proviron Steroid တစ်မျိုး၏စူးရှသော overdosage ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သို့မဟုတ် amesterolone ပြေးရသောအခါ ရာခိုင်နှုန်း။ သို့သော်အန်ဒရိုဂျင်၏န့်အသတ်အသုံးပြုမှုထိုကဲ့သို့သောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ, virilisation, စိတ်ရောဂါနှောင့်အယှက်, gynecomastia, အသည်းပြဿနာများ, လျှော့ချဂလူးကို့စသည်းခံစိတ်, ရွတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ, hypogonadal ပြည်နယ်နှင့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းသွေးထွက်အဖြစ်ပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအောက်ပါအတိုင်း။ တစ်ဦးကလက်တွေ့အကဲဖြတ်ရာတွင်အသုံးပြုရမည့်လက်ခဏာကုသမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ပြုသင့်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများအပေါ်လုံလောက်သောအသိပညာရှိသင့် Proviron ယူသည့်အခါ နှင့်ဆေးညွှန်း overdosage ရှောင်ရှားရန်အုပ်ချုပ်ခံရဖို့။
ကုန်ကြမ်း Proviron (mesterolone) သံသရာ
Proviron အနေနဲ့ဟို Steroid တစ်မျိုးမက, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲကြောင့်ပျက်စီးလွယ်ဟို features တွေရှိကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကတစ်ဦးတည်းစက်လီးစီးခြင်းမရနိုင်ပါ။ အဲဒီအစား, ကခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်, တစ်အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်အခြားဟို steroids အတူအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ၎င်း၏ဆန့်ကျင်အီစထိုဂျင်ဆိုးကျိုးများနှင့်ခက်ခဲကောင်မြှင့်တင်ရန်ကြောင်းဗေဒအကျိုးသက်ရောက်မှုများများအတွက် stack ထဲမှာပါဝင်သည်။ အားကြီးသောအန်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ခြင်းလည်းကာယဗလကြောင့်ကိုချစ်ဘာလို့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုအထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးဒြပ်ပေါင်းအဖြစ် Proviron ကိုအသုံးပြုဖို့သူအအထီးကာယဗလနှင့်အားကစားသမားများသံသရာကာလတစ်လျှောက်လုံးနေ့စဉ် 50mg မှ 100mg တစ်သောက်သုံးသောယူပါ။ ဤအချက်မှာကခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်အချိန်ပမာဏကိုမန့်သတ်ချက်များရှိပါသည်။ Proviron ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းအချို့ကာယဗလအတွက်အလုပ်လုပ်စေနိုင်သည်။ သူတို့ကဒါအီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့် minimize နှင့်ကလေးမွေးဖွားတိုးတက်လာဖို့လုပ်ပါ။ အဖြစ်တာကဒီမကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သော Nolvadex အဖြစ်ရာခိုင်နှုန်းစဉ်အတွင်းအသုံးပြုနိုင်အားကောင်းသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအခြားအကိုပိုမိုထိရောက်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် endogenous testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု၏ဖိနှိပ်မှုတစ်ခုအန္တရာယ်ရှိလြှငျ Proviron အားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
ကုန်ကြမ်း Proviron (mesterolone) သံသရာ 1
ရက်သတ္တပတ် Proviron Dianabol
1 တစ်နေ့လျှင် 50mg တစ်နေ့လျှင် 40mg
2 တစ်နေ့လျှင် 50mg တစ်နေ့လျှင် 40mg
3 တစ်နေ့လျှင် 50mg တစ်နေ့လျှင် 40mg
4 တစ်နေ့လျှင် 50mg တစ်နေ့လျှင် 40mg
5 တစ်နေ့လျှင် 50mg တစ်နေ့လျှင် 40mg
6 တစ်နေ့လျှင် 50mg တစ်နေ့လျှင် 40mg
7 တစ်နေ့လျှင် 50mg တစ်နေ့လျှင် 40mg
8 50mgper နေ့က တစ်နေ့လျှင် 40mg
ကုန်ကြမ်း Proviron (mesterolone) သံသရာ 2
ရက်သတ္တပတ် Proviron Anavar
1 40mg / နေ့ 40mg / နေ့
2 40mg / နေ့ 60mg / နေ့
3 60mg / နေ့ 80mg / နေ့
4 60mg / နေ့ 80mg / နေ့
5 60mg / နေ့ 80mg / နေ့
ကုန်ကြမ်း Proviron (mesterolone) Side Effect
Proviron သည်အခြားဟိုနှင့်အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအလုံခြုံဆုံး Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကာယဗလဒီ Steroid တစ်မျိုးသုံးပါနှင့်မည်သည့်မခံနိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းမရှိဘဲ၎င်း၏အကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစားနိုင်ပါ။ အနည်းငယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ့ကြုံစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသည်။ virilisation ၏အဆင့်ဆင့်အသုံးပြုမှုပြီးနောက်မြင့်ကတည်းကအမျိုးသမီး Proviron အကြံပြုသည်မဟုတ်။ mesterolone ၏အလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုအောက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။
ဘုံ proviron ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပါဝင်သည်;
Accelerated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကို
ဆိုးရွားသော proviron ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး;
ဤရွေ့ကား Proviron ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးပိုး mesterolone ကြာလျှင်ပိုဆိုးလိမ့်သို့မဟုတ်ပိုလျှံဆေးများစီမံခန့်ခွဲလိမ့်မည်။ ဒီအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန်အသုံးပြုသူများ Proviron နှင့်မှန်ကန်သောပမာဏယူသည့်အခါကိုသိသင့်ပါတယ်။
Is ဥပဒေရေးရာ Proviron?
စတီရွိုက်နှင့် ပတ်သက်. စည်းကမ်းများ, ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းဒေသများနှင့်တိုင်းပြည်များအကြားကွဲပြားခြားနား။ အဖြစ်တာ mesterolone (Proviron), သိပ္ပံနည်းကျကြောင့်ယင်း၏အနည်းငယ်မျှသာဟိုသက်ရောက်မှုတစ်ခုဟို Steroid တစ်မျိုးမဟုတ်သည်အတိုင်း, က, အရှင်တရားဝင်အချို့နိုင်ငံများအတွက်ဟို Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ Proviron သုံးအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများရှိဘုံဖြစ်၏ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ကနေဒါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ, ရော် mesterolone ယင်းထိန်းချုပ်ထားပစ္စည်းအက်ဥပဒေအောက်မှာဇယား 111 ပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ Proviron အပိုင်သို့မဟုတ်ပင်သုံးစွဲဖို့တရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုစတီရွိုက်၏, ဝယ်ယူသို့မဟုတ်လူကုန်ကူးမှုတင်သွင်းခြင်း, Proviron ပါဝင်သည်တစ်ရာဇဝတ်လုပ်ရပ်စဉ်းစားသည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (အင်္ဂလန်) ခုနှစ်, Proviron တစ်ဦးဇယား IV မူးယစ်ဆေးစဉ်းစားသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက် Proviron ၏အပိုင်များနှင့်အသုံးပြုမှုဒီတိုင်းပြည် သို့ဖြစ်. ဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Steroid တစ်မျိုး၏တင်သွင်းမှုကိုလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားများများအတွက်ရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။
ကနေဒါမှာတော့ Proviron ရုံဗြိတိန်၌ကဲ့သို့ဇယား IV အောက်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ ဒီဒြပ်ပေါင်းများ၏အပိုင်နှင့်ဝယ်ယူဥပဒေရေးရာကြောင်းမျှသာဆိုလိုသည်။ Proviron လူကုန်ကူးတားမြစ်ထားသောနှင့်ပြစ်မှုစဉ်းစားသည်။ သူများသည် Proviron $ 1000 နှင့် / သို့မဟုတ်ပထမရာဇဝတ်မှုများအတွက်ခြောက်လထောင်ချတဲ့ဒဏ်ငွေပေးဆောင်လူကုန်ကူးမှုဖမ်းမိ။ နောက်ဆက်တွဲပြစ်မှုကျူးလွန်သောသူတို့အား $ 2000 ဒဏ်ငွေနှင့် / သို့မဟုတ်တနှစ်ထောင်ဒဏ်အထိပေးဆောင်။ ဤရွေ့ကားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကနေဒါထိန်းချုပ်ထားမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပစ္စည်းအက်ဥပဒေ (CDSA) တွင်ဖော်ပြထားကြသည်။
proviron ဝယ်ယူရန်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့စျေးအချိုဆုံးလမ်းအများဆုံးအသုံးပြုသူများသည်နှင့်အညီအင်တာနက်ကနေတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံကုန်သည်တွေကနေဝယ်ယူပိုပြီးသင်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ အတော်များများကအားကစားရုံကုန်သည်တွေမူးယစ်ဆေးသယ်ဆောင်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ပမာဏကမရှိကြပါဘူး။ အများစုမှာအွန်လိုင်းပေးသွင်း Proviron သို့မဟုတ်အမြောက်အမြား၌တစ်ပုံစံရှိသည်။ သင်တစ်ဦးယေဘုယျမြေအောက်အမှတ်တံဆိပ်ရှာနေလျှင်တစ်ဦးအတုအွန်လိုင်းဖြတ်ပြီးလာမယ့်များ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုအထူးသဖြင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအပေါ်အချို့သောနောက်ခံစစ်ဆေးမှုများကျင့်ကိုကျင့်လျှင်သို့သော်ဤကိစ္စတွင်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာဥပဒေရေးရာ Schering Proviron အမြောက်အမြားနှင့်အတူတစ်ယေဘုယျအမှတ်တံဆိပ် purchasing များအတွက်သမျှမလိုပါလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်း Proviron purchasing မူးယစ်ဆေးဝါးလေ့လာဆည်းပူးခြင်းအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပေမယ့်ပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်များရှိပါတယ်လိမ့်မည်။ Proviron အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတစ်ဦးဇယား III ကိုမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကအွန်လိုင်းကဝယ်ယူဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပါလိမ့်မည်။ ဤသည်မိုးသည်းထန်စွာဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ပင်ထောင်ဒဏ်အောက်ပါအတိုင်း။ အသုံးပြုသူများသည်တရားဝင်သူတို့တစ်တွေဆေးညွှန်းများသာလျှင်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ အရာများ၏ဆေးညွှန်းဆေးပညာ, အတည်ပြုလိုက်ဖြောင့်မတ်နှင့်အစိုးရတို့ကလူသိများရမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ဥပဒေများအပေါ်နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့သော်လည်းအချို့နိုင်ငံများတွင်အလားတူဥပဒေများရှိသည်။ တခြားနိုင်ငံတွေထောက်ထားညှာထာသောပေမယ့်အလွန်တင်းကြပ်နှင့်ဟိုစတီရွိုက်၏အွန်လိုင်းရောင်းချခြင်းဆန့်ကျင်ကြသည်။ အဖြစ်တာ Proviron အလုံခြုံဆုံးဟို Steroid တစ်မျိုးသည်အတိုင်း, FDA ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုတရားဝင်မထားပါဘူး။
Proviron သည်အခြားအထောက်အပံ့ကိုပေးပြီး, ဟိုစတီရွိုက်သို့မဟုတ်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသို့သော်ဈေးကွက်ထဲမှာအလွယ်တကူရရှိနိုင်ဖြစ်သင့်ကြောင်းတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ဒြပ်ပေါင်းအဖြစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကြမ်း mesterolone ၏အကြီးဆုံးပမာဏ Schering ဆေးဝါးကထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ကြောင့် Proviron ၏သဘောသဘာဝနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာမှ, တကအတုထုတ်လုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဤသည်ဝယ်ယူမှုအောင်လာသောအခါသုံးစွဲသူများကိုသတိထားမဖြစ်သင့်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ မရတိုင်း ရောင်းရန် Proviron ကြော်ငြာယုံကြည်စိတ်ချရမည်။
အပြင်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများကထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်ကနေ, မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများကထုတ်လုပ်သူတွေကိုရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားမြေအောက်ဓါတ်ခွဲခန်းအခွင့်မရှိပါ, ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်သို့မဟုတ်ပင်လိုင်စင်ရ။ တိုတို, သူတို့သည်တရားမဝင်လည်ပတ်။ Proviron SARM အမြားအပွားများကသိရှိထားကြတဲ့အကြီးစားမြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများကထုတ်လုပ်သည့်ဒြပ်ပေါင်းများကိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွန်ဘုံမဟုတ်ပါဘူးကတည်းကသေးငယ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများကဒီဒြပ်ပေါင်းများထုတ်လုပ်ကြပါဘူး။ အဲဒီအစား, သူတို့ကတခြားလူကြိုက်များဟိုစတီရွိုက်နှင့်အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးထုတ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့် Proviron အလွန်အဘိုးထိုက်သောမရှိ, အချို့သောအတိုင်းအတာအထိပြုလုပ်လွယ်ကူစွာတည်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများသည်ထံမှဝယ်ယူနည်းနည်းပိုပြီးစျေးကြီးမြေအောက်ပေးသွင်းကနေဝယ်ယူထက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်, သို့သော်, ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ပစ္စည်းများနှိုင်းယှဉ်အားလုံးမြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများအတွက်အမှု (UGL) ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Schering $ 25 မှာ 0.83mg Proviron ရောင်းချ; အခွားသောဆေးဝါးကုမ္ပဏီများက $ 0.75 မှာရောင်း။ မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်း (UGL); အခြားတစ်ဖက်တွင်, $ 25.also များအတွက် 0.50mg Proviron ရောင်းချ, မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများအချိန်များတွင်ယင်းသို့ 100mg, 50mg, 25mg သို့မဟုတ်ပင် 20mg အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် proviron ထုတ်လုပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အများဆုံးမြေအောက်ထုတ်လုပ်သောပစ္စည်းများကိုများ၏အရည်အသွေး, အရှင်ဆေးဝါးပစ္စည်းများနှင့်အတူစျေးနှုန်းများနှိုင်းယှဉ်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်ယုတ္တိဗေဒမဟုတ်ပါဘူး။
legit Proviron ကြိမ်မှာခက်ခဲတာဝန်ဖြစ်ထွက်လွဲစေခြင်းငှာရောင်းသူတစ်ဦးအားကိုးထောက်ပံ့ရေးရှာဖွေခြင်း။ ရောင်းချရန်ကြော်ငြာများအတွက်ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ် mesterolone များအတွက် Proviron အားလုံးအင်တာနက်ကိုကျော်ဖြစ်ကြသည်။ အသုံးပြုသူများကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းတဲ့နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်လျက်မပါဘဲမည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူသင့်ပါဘူး။ သို့သော်သင်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်ကနေအွန်လိုင်း Proviron ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ Steroid.com မှာကျမတို့ကလည်းဘယ်ဆေးညွှန်းခြင်းမရှိဘဲတရားဝင်ဝယ်ယူကြသည်ဟုဥပဒေရေးရာဟိုကိုဆက်ကပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများတတ်နိုင်ဖြစ်ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှ Proviron ကိုဝယ်သည့်အခါကျွန်တော်တစ်ဦးပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ဥပဒေရေးရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို run ပြီးကတည်းကသငျသညျငွိမျဝခံစားရပါလိမ့်မယ်။ Mesterolone ကလူလည်းငါတို့တရားဝင်ပေးသောအခြားဟိုစတီရွိုက်, ရှာပါ။
Proviron သည်အခြားဟို steroids ကဲ့သို့အစွမ်းထက်မကျမည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အကြိုးခံစားခှငျ့သံသရာ၏အဆုံးမှာသိသာဖြစ်ကြသည်။ ငါသည်ငါ့ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာ၌အသုံးပြုသောနှင့်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ဘို့ရန်ပြင်ဆင်နေသည့်အခါပါပြီ။ ဒီတော့ဝေးအရာအားလုံးအကောင်းခဲ့, အဘယ်သူမျှမညညျးညူ။ ငါသည်ဤ Steroid တစ်မျိုးရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမပြုမီ, ငါ့ကိုယ်၌ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူကိစ္စများနှင့်ပင် endogenous testosterone ဟော်မုန်း၏ကြီးမားသောဆေးများယူခဲ့ရတယ်။ အခုတော့ကျွန်မရဲ့ stack ထဲမှာ Proviron Bayer ပါဝင်သည်ပြီ, ငါသာ endogenous testosterone ဟော်မုန်းနှင့်ကြိမ်အဘယ်သူမျှမမှာသေးငယ်တဲ့ပမာဏကိုအသုံးပြုပါ။ ငါသည်ဤ Steroid တစ်မျိုးငါ့ကိုပိန်ကြုံသောကြွက်သားငါ့အ bulking သံသရာအတွက်တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်ဟူသောအချက်ကိုကိုချစ်။ အဖြစ်အများကြီးအများကြီးကာယဗလယင်း၏သက်ရောက်မှုကိုမထီမဲ့မြင်မပြုအဖြစ်ကျွန်မ stack ကဖြည့်စွက်ရပ်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဤသည် Steroid တစ်မျိုးငါအတိတ်များတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်အခြား SARMs ထက် သာ. ကောင်း၏။ တကယ်တော့ငါသာနေတခါစူးရှသောခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်။ အကြှနျုပျ၏စိတျနဲ့အသိသုခချမ်းသာများသိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။
proviron အဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း? လူအများစုဟာ proviron (1424-00-6) အားနည်း Steroid တစ်မျိုးကြောင်းထင်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းသူတို့ဟော်မုန်းနားမလည်ဘူးသို့မဟုတ်ညာဘက်လမ်းအတွက်အသုံးမပြုကြသောကြောင့်သင်သံသရာချက်ချင်းဒီ Steroid တစ်မျိုးတစ်ဦးမှော်အသွင်ပြောင်းမမြင်ရပေမယ်င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှေးကွေးနေပေမယ့်သေချာ; အထူးသဖြင့်လာသောအခါ bulking သံသရာပေါ်မှာ။ အသုံးပြုသူများသည်ကတခြားဟို steroids အသုံးပြုတဲ့အခါတွေ့ကြုံဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခံရမလိုကတည်းကဒါဟာထူးခြားတဲ့နှင့်အထူးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးဆေးညွှန်းခြင်းမရှိဘဲတရားဝင် masterone (Proviron) လေးလည်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဝယ်လက်အိတ်ကပ်ဖော်ရွေစျေးနှုန်းများမှာ Steroid.com မှာရနိုင်တယ်။
1 alpha-mythyl-17 beta ကို-hydroxy-5alpha-androstan-3-One
Proviron မော်လီကျူးအလေးချိန်: 304.4716
Proviron ဝက်ဘဝကို: 12-13 နာရီ
အကြံပြုဆေးများ: 25mgs နေ့စဉ်ဖို့ 200mgs
အန်ဒရိုဂျင် / ဟိုအချိုး: 30-40: 100-150
detection အချိန်: ငါးခြောက်လမှရက်သတ္တပတ်
AJ, SL & AA ကို, oa (2009) ။ Mesterolone (Proviron) အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး Sprague Dawley ကြွက် testis အတွက်လိင်ဟော်မုန်းပရိုဖိုင်းအတွက်လျော့ချရေးနှင့်အတူအနိမ့်သုက်ပိုးအရည်အသွေးကိုဖြစ်ပေါ်သည်။ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနနှင့်အက်ဆေး, 4(4), 320-327 ။
စီး MA, & အကြောင်းအရာ, U. ဗြိတိန်ကြွက်သားကာယဗလလေ့ကျင့်ဖော်ရမ်။
Casquero, AC, Berti အဘိဓါန်, ဂျာ Teixeira, LLS, & de Oliveira, HCF (2017) ။ နာတာရှည်လေ့ကျင့်ခန်း Plasma လစ်ပိုပရိုတိန်းကိုယ်ရေးဖိုင်အပေါ် CETP နှင့် Mesterolone ကုသမှုတန်ပြန်လေ့ကျင့်ခန်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုလျှော့ချ: Transgene ကြွက်တွေအတွက်လေ့လာစရာများ။ Lipids, 52(12), 981-990 ။
4053 Views စာ
သငျသညျယ်ယူရန် Winstrol အွန်လိုင်းခင်မှာကိုသိရန်လိုအပ်ထိပ်တန်း 15 Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများ ဝက်ခြံများအတွက်ကုန်ကြမ်း Isotretinoin (Accutane): Isotretinoin နှင့်အတူဝက်ခြံကုသခြင်း